Baolina lavalava - Vehivavy :: Hitsapa ny ekipa afrikana tatsimo ny Makis, anio • AoRaha
Baolina lavalava – Vehivavy Hitsapa ny ekipa afrikana tatsimo ny Makis, anio
Hiditra amin’ny andro faharoa ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina lavalava, sokajy vehivavy sady fikatsahana tapakilan’ny fiadiana ny amboara eran-tany amin’ny taona 2021 any Nouvelle Zélande.
Hifandona amin’ny mpampiantrano, Afrika Atsimo, ny vehivavy malagasy anio amin’ity andro faharoa ity, rehefa avy niondrika teo anatrehan’i Kenya, tamin’ny isa 35 noho 5 tamin’ny zoma lasa teo.
Mafimafy ny hiandry ny Makis vehivavy satria tamin’ny lalao voalohany dia nomontsanin’i Afrika Atsimo tamin’ny isa 89 noho 5 ny ekipam-pirenen’i Oganda. Hifanandona amin’i Kenya kosa ity farany amin’io andro faharoa, anio.
Taorian’ny fanokafana ny fifaninanana dia mitana ny laharana voalohany vonjimaika i Afrika Atsimo sady efa mirona ho any amin’ny fahazoana ny tapakilan’ny “Mondial”. Faharoa vonjimaika indray ny Keniana izay miandrandra ny hiatrika ny lalao sakana amin’ny ekipa iray avy any Amerika Atsimo hahafahana mamonjy an’i Nouvelle Zélande amin’ny taona 2021. Ady laharana fahatelo kosa ny an’i Madagasikara amin’izao fandraisana anjara voalohany ho azy ireo eo amin’ny sehatra afrikana izao.